Bemiray • AoRaha
Olona maro no tonga namaly ny antson’i Rija Rasolondraibe, tamin’ ilay fampisehoana goavana izay notontosainy tetsy amin’ny lapan’ny Kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina, ny alakamisy lasa teo. Tsikaritra nandritra ny seho fa nitady aim-baovao entina hikolokoloana ny fanahy ny olona ary tsy diso anjara fanantenana ireo nanatrika satria nanovo aim-panahy vaovao indray. Tamin’ny alalan’ireo hira sy tenin’ny soratra Masina maro no nentin’ity mpanakanto ity nanovana izany. Raha tsiahivina dia indray mandeha isan-taona ihany i RIja Rasolondraibe no mandalo eto an-tanindrazana manolotra seho tsy manam-paharoa.
Nanomboka ny alarobia teo ny “Andro ho an’ny kolontsaina sinoa”, teny amin’ny trano famakiam-bokin’ny oniversite Ankatso. Nanokatra sy nanome voninahitra ny lanonana ny ambasadaoro sinoa monina sy miasa eto amintsika Yang Xiaorong sy ny filohan’ny oniversiten’
Antananarivo Panja Ramanoelina. Nambaran’ity masoivoho ity fa natao indrindra ho an’ny fifanakalozana kolontsaina eo amin’ny firenena roa tonta ity fotoana ity. Taorian’ny fandraisam-pitenenana samihafa, dia notokanana ny fampirantiana sary, maneho ireo zavatra mampiavaka an-dry zareo Sinoa. Teo ihany koa ny fanehoana
fahakingan-tanana amin’ny famoronana asa tanana samihafa, ny fampisehoana ny fanamboarana rano fisotro na ny dite, izay mampiavaka ity firenena ity.
Bemiray • Zavakanto
Fahafatesana mpanakanto Nodimandry i Alain Boutre, andrarezin’ny fandrindrana hira
FIFEHEZANA HAITENY VAHINY :: Herin’ny teny frantsay ny eto Madagasikara
FAHAVEREZANA POKETRA :: Vehivavy iray milaza fa novonoin’ny mpankanto iray